Nọvemba. Nhọrọ nke novelties | Akwụkwọ dị ugbu a
Nọvemba. Nhọrọ nke novelties
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 01/11/2021 12:00 | Emelitere ka 23/10/2021 14:03 | Akwụkwọ, Novela, Black akwụkwọ, Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya
November, penultimate ọnwa nke afọ. Nke a bụ otu nhọrọ nke novelties nchịkọta akụkọ na-apụta. Maka mmasị niile na bịanyere aka na ya Ken Follet, Lorena Franco, Luis Roso, Luca D'Andrea, Pam Jenoff na Charlotte Link. Anyị na-ele anya.
1 Nwanyị ahụ nwere kpakpando na-acha anụnụ anụnụ - Pam Jenoff
3 Njikọ nke Ụwa - Njikọ Charlotte
4 Ndị mmụọ ọjọọ niile - Luis Roso
5 Ọ dịghị mgbe - Ken Follett
6 Ụbọchị anyị hapụrụ - Lorena Franco
Nwanyị nwere kpakpando na-acha anụnụ anụnụ -Pam Jenoff
Onye edemede nke Ụmụ agbọghọ Paris na-efu efu y The Orphan Wagon na-ebipụta akụkọ ọhụrụ a etinyere na ya 1942. Kpakpando Sadie gault, otu nwa agbọghọ dị afọ iri na asatọ, bụ́ onye, ​​ya na ndị mụrụ ya, ga-agbapụ mgbe ha nọ nazis mebie ghetto nke Cracovia ebe ha bi. Ha na-agbaba n'ọwa mmiri na otu ụbọchị Sadie, na-ele anya site na grate, hụrụ otu nwa agbọghọ dị afọ ya ka ọ na-azụta okooko osisi na-achọpụtakwa ya. Aha ya Elle stepanek na ndụ dịtụ mma ekele nne nkuchi ya, onye na-arụkọ ọrụ nke German. Elle na Sadie ghọrọ enyi, ma ọnọdụ ahụ gbagwojuru anya na agha ahụ ga-anwale ha.
lisy - Luca D'Andrea
Luca D'Andrea Ọ ghọwo otu n'ime ndị odee ojii nke Ịtali a ma ama. Ugbu a na-ebipụta ọhụrụ a aha na-esetịpụrụ na oyi nke 1974. Ọ na-egosi otu nwa agbọghọ aha ya bụ Marlene onye chọpụtara na ọ bụ ime Herr Wegener, di ya na nwoke kacha atụ egwu na Tyrol niile. Kpebie ịgbapụ n'ihi na ị chọrọ ịzụ nwa gị pụọ n'ihe ike, ma n'ime otú ahụ o nwere ihe mberede ụgbọ ala nke ọ na-azọpụta Simon keller, onye ọrụ ubi nke bi n'ụzọ ọdịnala ndị Tyrolean ma kpọrọ ya gaa n'ugbo ya dịpụrụ adịpụ ilekọta ya.
Mgbe Wegener Ọ na-agbalịsi ike ịchọ nwunye ya iji nọgide na-enwe aha ya n'ebe òtù ndị omempụ dị ike bụ́ ndị ọ nọ na ya nọ. Ga-eziga a hitman akpọrọ nwoke ntụkwasị obi, onye na-agaghị akwụsị ruo mgbe o mezuru ọrụ ya. Ma isi ihe bụ na Marlene agaghị ama nke iyi egwu dị njọ: di ya, onye na-eti ihe ma ọ bụ lisy, ihe omimi dị n'ugbo Keller.
Mmekọrịta nke ụwa - Charlotte njikọ
Abia na nke atọ de Oge nke oké ifufe, akụkọ ezinụlọ kacha ewu ewu ma na-esochi nke onye edemede German a.
Onye isi ihe, Felicia lavergneỌ gara n'ihu na-azụ ahịa ya mana ọ maara na n'oge na-adịghị anya ọ ga-enyefe ndị na-eto eto ọrụ. Ma ụmụ ya ndị inyom adịghị njikere ibu ihe nketa ya. Belle O biri na United States kemgbe Agha Ụwa nke Abụọ biri, ma ọ dịtụbeghị mgbe o mere mgbanwe n'obodo ahụ. Susanne O bi n'ike n'ebe ụmụ ya nwanyị ndị ọ na-enwebeghị ike ịnagide ọgbaghara nke di na nna onye omekome agha Nazi. Ga-abụ Alexandra Soro ya na nzọụkwụ nne nne ya. Mana otu ọdachi na-atụghị anya ya ọ ga-agbanwe ihe niile.
Ndị mmụọ ọjọọ niile - Luis Roso
Luis Roso kwuru weghachite onye nleba anya Ernesto trevejo, agwa onye nyere ya ihe ịga nke ọma na ndị kpakpando Mmiri ozuzo y Obi ojoo.
Anyị na-na okpomọkụ nke 1960 na onye isi ọrụ sitere na ụlọ ọrụ ọha na eze German ka egburu na Madrid. Gọọmentị Spanish na-anwa ịzere ihe omume ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee nye Trevejo ikpe ahụ. Nke a, ya na prọfesọ America dị omimi, ga-enyocha mmalite nke a mmiri egosipụtara na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie dị na Zurich, nke yiri ka ọ bụ isi ihe kpatara mpụ ahụ. Ma, n'ebughị n'uche ya, ọ ga-ahụ onwe ya na otu n'ime atụmatụ ọjọọ nke ọchịchị Franco: Ndị Nazi gbara ọsọ ndụ na Spain kemgbe Agha Ụwa nke Abụọ biri.
Mgbe - Ken Follett
Kedu ihe ma ọ bụrụ na nsogbu zuru ụwa ọnụ na-enwetụbeghị ụdị ya na-eyi egwu itinye anyị n'ọnụ ụzọ ámá nke a Agha Ụwa nke Atọ? Ọfọn nke ahụ bụ ihe ọ na-ebuli Ken Follett na akwụkwọ akụkọ ọhụrụ a, ebe ụdị akụkọ ihe mere eme na-adọba ntakịrị wee nwetaghachi ihe egwu. Ndị na-akwado ya bụ a otu agwa na obi siri ike onye ga-alụ ọgụ n'ọsọ megide oge sitere n'akụkụ dị iche iche nke ụwa.
Ụbọchị ndị anyị hapụrụ - Lorena Franco
24 maka November
Lorena Franco na-aga n'ihu na-enweghị nkwụsị n'ọrụ agụmagụ ya ma gbakwunyere ya aha ọhụrụ a trawontọ ogologo kemgbe ọ malitere ndepụta na Amazon wee nweta ihe ịga nke ọma na-enwetụbeghị ụdị ya Oge njem. Ugbu a gosi akụkọ a atọrọ na ime obodo Catalonia.
Kpakpando Olivia, onye na-arụ ọrụ na mmemme mmemme paranormal kachasị mkpa na mba ahụ. Afọ iri abụọ mgbe nke ahụ gasịrị ọnwụ nke nne ya, eziokwu nke akara ndụ ya, na traumatized site iju furu efu Ebel, enyi ya nwoke na onye ya na ya na-arụkọ ọrụ, na Aokigahara, oke ọhịa igbu onwe onye Japan, na-ata ahụhụ a ihe mberede nke ahụ na-ahapụ ya coma ụbọchị ole na ole. Mgbe o tetara, o kpebiri ịlaghachi n'obodo ya. Llers, nke a maara dị ka obodo ndị amoosu. N'ebe ahụ ka ọ ga-ezute ọzọ ya na ndị enyi ya na-eto eto na ịhụnanya mbụ ya; Ivan, bụrụ onye nta akụkọ a ma ama, onye ọ ga-eji nyochaa oge gara aga Llers na ihe kpatara ọnwụ nne ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Nọvemba. Nhọrọ nke novelties
Ramón M.ª del Valle-Inclan. Ememe ncheta ọmụmụ ya. Iberibe